Any.do ရဲ့ Task များစာရင်း & to-do List ကို-က Android - အဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့ Apps
Nokia က 1100 Android က Lollipop နှင့်အတူပြန်သွားတူ
HTC One ကို M9 မကြာခင်ထွက်မ
ကို Android Redmi Note
Email နဲ့ SMS ကို
Live wallpaper ကို
Security , privacy ကို & antivirus ကို
Security , Privacy & ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပေးတဲ့
မိုးလေဝသ & သတင်း
နောက်ဆုံးရ Tech မှ
ငွေရှာ! ဆိုက်ကိုပိုင်ရှင်များ! ဒီဆိုက်ကနေငွေရှာ ဒီမှာ.
Any.do ရဲ့ Task များစာရင်း & to-do List ကို-က Android
admin ရဲ့ ဧပြီလ 20, 2015 Android မှာ, Apps က , စီးပွားရေး , လူနေမှုစတိုင် , Personalization , ကုန်ထုတ်စွမ်းအား , အသုံးအဆောင်များ အထူးပြောစရာမရှိ
ကမ္ဘာအနှံ့သန်းပေါင်းများစွာ Any.do ရဲ့ Task List ကိုသုံးပါ & To-do List-Android to capture ideas, လုပ်ဖို့အမှုအရာ, သူတို့နှင့်ပတ်ပတ်လည်လူတို့နှင့်အတူပူးပေါင်း. အလုပ်မှာကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းနှင့်စည်းရုံးရေးမှသင်၏နောက်အားလပ်ရက်စီစဉ်သို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ်ဦးနှင့်အတူကုန်စုံ list ကိုဝေမျှခြင်းထံမှ – Any.do တစ်နေရာတည်းတှငျဖှဲ့စညျးသင်၏အသက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လွယ်ကူစေသည်. Any.do ချောမွေ့စွာသင်၏မိုဘိုင်းအကြား syncs, desktop ပေါ်မှာ, ဝက်ဘ်နှင့် tablet ကိုသင်တို့သည်ဤမျှ, နှင့်သင့်ပတ်လည်ကလူတိုင်း, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေ access လုပ်နိုင်.
Any.do ချောမွေ့စွာသင်၏မိုဘိုင်းအကြား syncs, desktop ပေါ်မှာ, ဝက်ဘ်နှင့် tablet ကိုသင်တို့သည်ဤမျှ, နှင့်သင့်ပတ်လည်ကလူတိုင်း, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေ access လုပ်နိုင်.
ကျနော်တို့အလုပ်ကစီမံသော့ချက် features တွေကိုထည့်သွင်း: မရှိကိုမိုဃ်းတိမ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်း, မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှု, စိတ်ကြိုက်အချိန်နှင့်တည်နေရာကိုသတိပေးချက်များ, shared တာဝန်များကို, မာလ်တီမီဒီယာမှတ်စုများ, နှင့်လက်ဟန်ခြေဟန်ထောက်ခံမှု.
*a "ကထိပ်တန်း Named 10 New York Times ကိုအားဖြင့်ရပါမယ်-ကြပါပြီ App ကို "*
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Any.do နှင့်အတူအောင်မြင်မှု Make:
စင်ကြယ်သော, smart ဒီဇိုင်းကိုသင်နေ့အဘို့သင်၏ပန်းတိုင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်စောင့်ရှောက်
လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်, မိတ်ဆွေများကို, နှင့်အိမ်ထောင်ဖက်အမှုအရာအတူတူပြုသောအမှုရရန်
ကုန်စုံစာရင်းများ Update, အိမ်မှုဝေယျာ, နှင့် '' ပျားရည် Do '' စာရင်းများကို real-time ၌သင်တို့၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မိသားစုနှင့်အတူ
ဗီဒီယို Attach, အသံဖိုင်, ဓာတ်ပုံနှင့် Dropbox ဖိုင်မဆိုအလုပ်တခုကိုမှ
မှန်မှန်စီစဉ်ထား todo ရဲ့ထပ်တလဲလဲတာဝန်များကို Set
အိမ်မှာသင့်ရဲ့စာရင်းအားလုံး access, ရုံး, သို့မဟုတ်သွားလာရင်းအပေါ်. သင့်ရဲ့ Any.do task manager ကိုဿုံသင့်မိုဘိုင်းအပေါ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ, ဝဘ် app ကို, သို့မဟုတ်ခရုမ်း
အလိုလို Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီး, ဖြည့်စွက်ရန် swipe, မြန်ဆန် Any.do လုပ်စည်းရုံးရေးတာဝန်များကိုအဘို့ကြီးစွာသောစီမံဖယ်ရှားပစ်ရန်ကိုလှုပ်
စာရင်းတစ်ခုသို့သင်တို့ကိုငါတာဝန်များကိုပြောဆိုရန်စကားသံကို entry ကိုကိုအသုံးပြုပါ, သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက် Auto-အကြံပြု feature ကိုအတူရိုက်ထည့်
Any.do Moment, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနေ့စဉ်သတင်းစာစီမံ, နောက်တဖန်အသင်၏အသက်တာပျော်စရာစီမံခန့်ခွဲစေမည်
သငျသညျအလုပျကိုကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာ, မိသားစုကို, တစ်နေရာတည်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကို, သငျသညျအဘယျသို့အရေးပါပါတယ်များအတွက်အများကြီးပိုပြီးအချိန်ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်.
သင်တစ်ဦးသည်စစ်မှန်သောလိုလားသူဆိုရင်, Any.do တစ်ဦးပရီမီယံကြေးပေးသွင်းနှင့်အတူပင်ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့
**သာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အထူးပစ်လွှတ်စျေးနှုန်း $2.99/ တစ်လသို့မဟုတ် $26.99/ တစ်နှစ်**
(မှန်မှန် $4.99/ တစ်လသို့မဟုတ် $49.99/ တစ်နှစ်)
အထက်အခမဲ့ Any.do features တွေအနေနဲ့န့်အသတ်ငွေပမာဏခံစားကြည့်ပါ, အပေါင်း:
အထူးအအရောင် themes များရဲ့ array
Any.do ကျွမ်းကျင်သူများကကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-အိမ်သူအိမ်သားအဖွဲ့သည်ထံမှထောက်ခံမှုကိုဦးစားပေး
ပရီမီယံ subscriptions ကိုသင့်ရဲ့အကောင့်ကို Google Play စအားဖြင့်သင်တို့၏ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်. အနည်းဆုံးတော့ကိုဖျက်သိမ်းမဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ subscription ကိုအလိုအလျှောက်သက်တမ်းတိုးဖို့လိမ့်မည် 24 လက်ရှိကာလမကုန်မီနာရီကြာ. သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်, ငါတို့မူကားပြီးသား billed ပြီဆိုလစာကာလအဘို့ငွေပြန်အမ်းထုတ်ပေးနိုင်ရင်. ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက် Account Settings ကိုသင်၌ subscriptions ကို Manage.
[themify_button စတိုင် =”xlarge စိမ်းလန်းသောဖောင်းကြွစာလုံး” link ကို =”ကို http://techandapps.com/download/apk/com.anydo.apk” ]download[/themify_button]
သငျသညျနိုင်ဂျီးရီးယားမှဖြစ်ကြ၏? လက်လွတ်မနေပါနဲ့ Yakata ယနေ့ပင်.
Facebook ပေါ်မှာ share ဖို့ကိုနှိပ်ပါ (အသစ်သောပြတင်းပေါက်၌ဖွင့်လှစ်)
Twitter ပေါ်မှာမျှဝေဖို့ကိုနှိပ်လိုက်ပါ (အသစ်သောပြတင်းပေါက်၌ဖွင့်လှစ်)
Google တွင်မျှဝေဖို့ကိုနှိပ်လိုက်ပါ (အသစ်သောပြတင်းပေါက်၌ဖွင့်လှစ်)
admin ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2015
Temple Run: Oz-IOS
admin ရဲ့ မတ်လ 29, 2015
TrueCaller – caller ID & ပိတ်ပင်တားဆီးမှု-ကို Android
admin ရဲ့ မတ်လ 4, 2015
Android အတွက်အင်္ဂလိပ်အာရဗီ Translator
အဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့ Apps မူပိုင်ခွင့် © 2017. theme အားဖြင့် MyThemeShop
ကျွန်ုပ်တို့အား နဲ့အတူ Advertise
App ကို Submit